मेथीको बारे यति जानकारी पढे पछि तपाईले मेथी खान कहिलै छुटाउनु हुन्न - ज्ञानविज्ञान
मेथी साग तथा मसलाको रूपमा प्रयोग गरिने वनस्पति हो । मेथी भान्सामा नियमित प्रयोग हुने मसलारुपी खाद्य पदार्थ हो । आयुर्वेदमा मेथीलाई बहुगुणी औषधीको रुपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । प्राचिन काल देखिनै यस्को औषधीय गुणका कारण तरकारी तथा औषधीको रुपमा यस्को प्रयोग गरिंदै आएको छ ।
मेथीको दाना र मेथीको साग नै स्वास्थ्यका लागि निकै फलदायी हुन्छन् । यहाँ हामी मेथीका सागका र मेथीका दानाको स्वास्थ्यमा पर्ने फाइदाका बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ ।
यो जानकारी फैलाउँन सक्दो सेयर गर्नुहोस् ।
Don't Miss it कहिलै नहासेको कालभैरवको मूर्ति एक्कासी कसरी हास्यो ? कारण यस्तो छ
Up Next ५ दिमाग रन्थन्याउँने प्रश्नहरु जवाफ सहित
यी ८ रोगको उपचारमा घिउको प्रयोग
१. कपाल दुखेमा गाईको घ्यू पाँच चम्चा कराईमा तताउनु र सात गेडा मरिच डडाउनु र छानेर राख्नु । टाउको दुखेको…